ရဲနှင့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား တေလာဆွစ် သူမ၏ ဖျော်ဖြေပွဲလက်မှတ်များ အခမဲ့ ပေးစေခဲ့ - Yangon Media Group
ရဲနှင့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား တေလာဆွစ် သူမ၏ ဖျော်ဖြေပွဲလက်မှတ်များ အခမဲ့ ပေးစေခဲ့
ဟောလိဝုဒ်၊ ဇူလိုင် ၂၉
ယခုအပတ်အတွင်း မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်၌ ပြုလုပ်ခဲ့သော တေလာဆွစ် ဖျော်ဖြေပွဲ၌ အထူးဧည့်သည် တော်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်းသိရသည်။ ၎င်းတို့မှာ ထင်ပေါ်ကျော် ကြားသူများတော့ မဟုတ်ခဲ့ပေ။ သို့သော် ချီးကျူးဂုဏ်ပြုထိုက်သူများဖြစ်ကြပေသည်။
တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း ကျဆုံးခဲ့ရ သော ရဲတပ်ကြပ်ကြီးမိုက်ကယ်ချက်စ်နာ သတင်းအား ကြားသိခဲ့ရပြီးနောက် ဆွစ်သည် တရားဥပဒေဘက်တော်သားများအား ဇူလိုင် ၂၆ ရက်က Foxborough ၌ကျင်းပပြုလုပ်သော သူမ၏ ဖျော်ဖြေပွဲသို့တက်ရောက်ရန် လက်မှတ်အများအ ပြားပေးအပ်ခဲ့သည်။ The Patriot Ledger သတင်းစာက ဆွစ်သည် ရာနှင့်ချီသောလက်မှတ်များအား Weymouth မြို့အားပေးစေခဲ့ကြောင်း သတင်းဖော် ပြခဲ့သည်။
”ဒီလက်မှတ်အရေအတွက်က ရဲအရာရှိတိုင်း၊ မီးသတ်အရာရှိတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ မိသားစုဆွေမျိုးတွေနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အထိပါ တက်ရောက်ဖို့ လုံလောက်ခဲ့ပါတယ်”ဟု Weymouth မြို့တော်ဝန် ရောဘတ်ဟက်ဒ်လန်းဒ်က ပြောဆိုခဲ့သည်။ ဆွစ်ရဲ့ ဒီလုပ်ရပ်ဟာ အင်မတန်မှ ရက်ရောမှုရှိပါတယ်။ ကျေးဇူးအများ ကြီးတင်ရှိပါတယ်”ဟု ၎င်းကဆိုခဲ့သည်။
လားရှိုးမြို့တွင် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းခဲ့ပြီး ရေလျှံခဲ့မှုကြောင့် အိမ်စီး ကားတစ်စီးနှင်?
တစ်ဦးတည်းနေရတဲ့ အချိန်တွေကို သဘောကျတဲ့ LeAnn
မြင့်မြတ်၊ ကျော်ကျော်ဗိုလ်၊ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်တို့ ပါဝင်ထားသည့် ‘မင်္ဂလာခုတင်’ ဟာသရုပ်ရှင် ဇာတ်ကာ?
မန်းရွှေစက်တော် ဘုရားအနီး၌ ခရီးသွားများလေ့လာနိုင်သည့် ဆင်စခန်းတစ်ခုကို ဘုရားပွဲတော် ဖွင့်?
မင်းသားကြီး ချာလီရှင်း ရဲ့ အိမ်ကို ဒေါ်လာ ၈ ဒသမ ၅ သန်းနဲ့ ဝယ်ယူလိုက်တဲ့ ကန်ဒယ်ဂျန်နာ
တရုတ်နိုင်ငံတွင် ဂျပန်အမျိုးသား တစ်ဦးကို ထောင်ဒဏ် ခြောက်နှစ် ပြစ်ဒဏ်ချ
ဝိုင်နီဒြပ်ပေါင်းက သွားပျက်စီးမှုနှင့် သွားဖုံးရောဂါ ကုသရေးကို အထောက်အကူပြုစေနိုင်
နှစ်​(၇၀)ပြည့်​လွတ်​လပ်​​ရေး​နေ့နိုင်​ငံ​တော်​အလံတင်​အခမ်းအနား နှင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတမှ??